thin zar – စာမျက်နှာ2– FERD
Author Archives: thin zar
Article author thin zar
(၂၉) ကြိမ်မြောက် ဒေသတွင်းဘက်စုံစီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ကုန်သွယ်ရေးညှိနှိုင်းမှု ကော်မတီ၏ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကို Video Conference ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်
သတင်းBy thin zar ဧပြီ 21, 2020
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီလ ၂၀ ရက်၊ နေပြည်တော် (၂၉) ကြိမ်မြောက် ဒေသတွင်း ဘက်စုံစီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု (Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP) ကုန်သွယ်ရေးညှိနှိုင်းမှုကော်မတီ၏ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီလ ၂၀ ရက်နေ့၊ နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီတွင် Video Conferencing ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်ရေးညှိနှိုင်းမှု ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Mr. Iman Pambagyo က အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဂျကာတာမြို့ရှိ အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးမှ အစည်းအဝေးသဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက် ခဲ့ပြီး Facilitator အဖြစ် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ စက်မှုနှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနမှ ကုန်သွယ်ရေး…
သတင်းBy thin zar ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 28, 2020
ဝူဟန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ (COVID-19) နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန် အချက် အလက်များနှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံခြား စီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၁)တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ဝန်ထမ်းများ သိရှိနိုင်စေရန် ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးဟော ပြောပွဲကို ကျင်းပခဲ့သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးအောင်နိုင်ဦးမှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခြင်း အဆိုပါဆွေးနွေးဟောပြောပွဲသို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးအောင်နိုင်ဦးနှင့် ရုံးအမှတ်(၁)တွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်နေသော ဝန်ထမ်းများ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ လက်ထောက်အတွင်းဝန် ဒေါက်တာကျော်ခိုင်က ရောဂါစတင်ဖြစ်ပွားသည့်နေရာအကြောင်း၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအချို့တွင် လက်ရှိရောဂါ ကူးစက်မှုအခြေအနေအကြောင်း၊ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်၏ ရောဂါလက္ခဏာများအကြောင်း၊ မည်သို့ ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားနိုင်ကြောင်း၊ ရောဂါကူးစက်မှုကို ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများနှင့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နှင့်သက်ဆိုင်သော ပညာပေး ဗဟုသုတများကိုလည်း‌ ဆွေးနွေး…
ပြင်သစ်နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအေဂျင်စီ Agence Francaise de Developpement (AFD) နှင့် မြန်မာနိုင်ငံအကြား နှစ်စဉ်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုအစည်းအဝေးကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွား ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသန်းအောင်ကျော်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြင်သစ်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Christian Lechervy တို့က ဦးဆောင်၍ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၅) ရက် နေ့တွင် နေပြည်တော်ရှိ M Gallery Hotel ၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က Myanmar Priorities for Development Assistance (DA) and DA Procedures ကိုလည်းကောင်း၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဉီးစီးဌာနက The Role of Project Bank ကိုလည်းကောင်း၊…
သတင်းBy thin zar ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 20, 2020
နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသန်းအောင်ကျော်သည် အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ Country Director ၊ Mr. Newin Sinsiri အား ယနေ့နံနက် ၁၁:၀၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွား ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၏ ချေးငွေ/အထောက်အပံ့နှင့်ဆောင်ရွက်နေသည့် မန္တလေး မြို့ပြဝန်ဆောင်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်း (Mandalay Urban Service Improvement Project-MUSIP)နှင့်စပ်လျဉ်း၍ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီတို့နှင့် ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားနိုင်မည့် အခြေအနေများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ADB မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၃ ခုနှစ်အတွင်း ပေးအပ်မည့် အကူအညီအထောက်အပံ့ အစီအစဉ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မတ်လအတွင်း…
သတင်းBy thin zar ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 17, 2020
၁။ ဂျပန် ODA ချေးငွေ ဂျပန်ယန်း ၁၇ ဘီလီယံဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ဆင်းရဲမှုလျှော့ချ ရေးဆိုင်ရာ ဒေသတွင်းဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်း အဆင့်-၁ (MY-P1) ၏ (၃၄) ကြိမ်မြောက် PMU အစည်း အဝေးနှင့် ဂျပန်ယန်း ၂၃.၉၇၉ ဘီလီယံဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ဆင်းရဲမှုလျှော့ချရေးဆိုင်ရာ ဒေသတွင်းဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်း အဆင့်-၂ (MY-P17) ၏ (၈) ကြိမ်မြောက် PMU အစည်းအဝေးကို နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသန်းအောင်ကျော်မှ ဦးဆောင်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွား ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အစည်းအဝေးခန်းမ(၃)၌ ယနေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ၂။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးသို့ သက်ဆိုင်ရာစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည့် ဝန်ကြီးဌာနများမှ Project Management Unit အဖွဲ့ဝင်များ၊ အကြံပေးကုမ္ပဏီများ နှင့်…
ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၊ ဂျပန် နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီနှင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေး(Joint Country Portfolio Review-JCPR Plenary Meeting) ကျင်းပခြင်း
သတင်းBy thin zar ဇန်နဝါရီ 28, 2020
ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၊ ဂျပန်နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီနှင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း မျက်နှာ စုံညီအစည်းအဝေးကို ၂ဝ၂ဝ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၇ ရက်နေ့ ၁၄:ဝဝ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ Hilton Hotel ၌ကျင်းပခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးကို ကမ္ဘာ့ဘဏ်က သဘာပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ယင်းအစည်းအဝေးသို့ ဖွံ့ဖြိုးမှု အကူအညီများညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့(DACU)အတွင်းရေးမှူးနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှကိုယ်စား လှယ်များ၊ အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဂျပန်နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အေဂျင်စီမှကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင် ဝန်ကြီးဌာန၊ အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ် ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၊ ပြည်ထောင်စု…
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ ဒါနန်းမြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် မဲခေါင်သိပ္ပံအုပ်ချုပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေး (၂/၂၀၁၉) သို့ တက်ရောက်
သတင်းBy thin zar ဒီဇင်ဘာ 23, 2019
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ ဒါနန်းမြို့တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက် နှင့် ၁၈ ရက်တို့၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်သည့် မဲခေါင်သိပ္ပံအုပ်ချုပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးများဖြစ်ကြသည့် မဲခေါင်သိပ္ပံ ဦးဆောင်ကော်မတီအစည်းအဝေး (၂/၂၀၁၉) နှင့် မဲခေါင်သိပ္ပံကောင်စီ အစည်းအဝေး (၂/၂၀၁၉) တို့သို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားစီးပွား ဆက်သွယ် ရေး ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသန်းအောင်ကျော် ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့သည်။ အစည်းအဝေး၌ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒုတိယ (၆) လပတ်အတွင်း မဲခေါင်သိပ္ပံ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် များ၊ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုများ၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် မဲခေါင်သိပ္ပံ၏ ရှေ့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အခြေ အနေနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ မဲခေါင်သိပ္ပံ၏ မဟာဗျူဟာ စီမံချက်…
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် နော်ဝေနိုင်ငံအစိုးရတို့အကြား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ သက်တမ်းတိုးနားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုး
သတင်းBy thin zar ဒီဇင်ဘာ 9, 2019
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု နှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာန နှင့် နော်ဝေနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတို့အကြား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဆိုင်ရာ သက်တမ်းတိုးနားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းအခမ်းအနားကို ယနေ့မွန်းလွဲ ၁၂:၃၀ နာရီတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နေပြည်တော်၌ ကျင်းပပါသည်။ လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲသို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်း အတွင်းဝန် ဉီးအောင်နိုင်ဉီးနှင့်တာဝန်ရှိသူများ နော်ဝေနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ State Secretary, H.E. Ms. Marianne Hagen၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နော်ဝေသံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Tone Tinnes နှင့် နော်ဝေသံရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။ အဆိုပါ သက်တမ်းတိုးနားလည်မှုစာချွန်လွှာကို ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ ကိုယ်စား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဉီးအောင်နိုင်ဉီးနှင့် နော်ဝေနိုင်ငံအစိုးရကိုယ်စား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ State…
ဒုတိယအကြိမ် မြန်မာနိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး စားပွဲဝိုင်း ဆွေးနွေးပွဲ (2nd Myanmar Development Effectiveness Roundtable – 2nd MDER)
သတင်းBy thin zar နိုဝင်ဘာ 28, 2019
“အရင်းအမြစ်များကို အကျိုးရှိရှိအသုံးချခြင်းဖြင့် အားလုံးညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးတိုင်ပင်၍ အသိအမြင် ဖလှယ်ခြင်းနှင့် ပြည်သူများပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းတို့ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်းကို အောင်မြင်အောင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါစို့” မြန်မာနိုင်ငံ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီမူဝါဒအရ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် နိုင်ငံခြားအကူအညီ အထောက်အပံ့များ ရယူဆောင်ရွက်ရာတွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ချမှတ်ထားသော ဖွံ့ဖြိုးမှု ဆိုင်ရာ အခြေခံစည်းမျဉ်းများ ဖြစ်သည့် ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေး အစီအစဉ်များကို ဦးဆောင် သတ်မှတ်ခြင်း၊ ရလဒ်များအပေါ် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အားလုံး ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်း၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိခြင်းနှင့် တာဝန်ခံမှုရှိခြင်းတို့ဖြင့် ထိရောက်မှုရှိစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နှင့် အလှူရှင်နိုင်ငံများ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု လုပ်ငန်းများ အားကောင်းလာစေရန် ရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတကာက ပေးအပ်သော ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီများကို အသုံးပြုရာတွင် ပြည်သူများ ထိရောက်စွာ…
နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဉီးစီးဌာန နှင့် ဂျာမနီနိုင်ငံအခြေစိုက် GOPA အတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့တို့ အကြား ပြင်ဆင်ချက်နားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကျင်းပ
သတင်းBy thin zar စက်တင်ဘာ 20, 2019
နေပြည်တော် စက်တင်ဘာ ၁၈ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဉီးစီးဌာနနှင့် ဂျာမနီနိုင်ငံအခြေစိုက် GOPA အတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့တို့အကြား ပြင်ဆင်ချက် နားလည်မှု စာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းအခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၁၅: ၃၀ နာရီတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၁) အစည်း အဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပကြသည်။ အခမ်းအနားသို့ နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဉီးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဉီးသန်းအောင်ကျော်၊ GOPA အတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့မှ Project Manager ဖြစ်သူ Ms. Marina Eichhorn၊ Team Leader ဖြစ်သူ Dr. Stefan Hell နှင့် GOPA အတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူ များ၊ သက်ဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးများနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြပါသည်။…